पीसी थर्मो उपकरणहरू
जन्मको मिति परिवर्तन गर्नुहोस् VKontakte
YouTube च्यानल सत्यापन
एमएस वर्ड पाठ कागजात JPEG छविमा रूपान्तरण गर्नुहोस्
रोचक लेख - January 27,2020
कम्प्युटरमा RAM बढाउनुहोस्
स्काइप कार्यक्रम: पोर्टल नम्बरहरू आगमन कनेक्शनका लागि
रोचक लेख 2020
Firefox इन्जिनमा आधारित लोकप्रिय ब्राउजर
मोजिला फायरफक्स एक लोकप्रिय ब्राउजर हो जुन सम्पूर्ण संसारमा धेरै प्रशंसकहरू छन्। यदि तपाईं यो वेब ब्राउजरसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, तर एकै समयमा तपाईँ केहि नयाँ प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसपछि यो लेखमा तपाइँ ब्राउजरहरू जुन फायरफक्स इञ्जिनमा आधारित हुन्छन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले जान्दछन्, Google क्रोम ब्राउजरको आधारमा, धेरै प्रसिद्ध ज्ञात ब्राउजरहरू सिर्जना गरिएका छन्, जसमा, उदाहरणका लागि, Yandex फरक हुन सक्छ।
एन्ड्रोइडमा भिडियो देखाउने छैन, के गर्ने?
एसएसडीमा विन्डोज 10 स्थापना गर्दै
बाह्य हार्ड ड्राइभ चयन गर्न सुझावहरू
Lenovo A526 स्मार्टफोन फर्मवेयर
Android मा Snapchat कसरी प्रयोग गर्ने
VKontakte को एक समूह कसरी हटाउने
स्काइभ भन्डार मार्फत फाइलहरू कहाँ स्थानांतरित छन्?
कम्प्युटरलाई बुट गर्दा जब F1 थिच्न सोध्छ भने के गर्न
अभिलेख आरआर, जिप र 7z मा ​​पासवर्ड कसरी राख्ने?
तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम Instagram मा कसरी परिवर्तन गर्ने?
तपाईंको कम्प्युटर भाइरसबाट सुरक्षित गर्नुहोस्
भापमा स्क्रिनशटहरू अपलोड कसरी गर्ने?
फोटोशपमा हाइलाइटहरू सिर्जना गर्नुहोस्
WonderShare डिस्क प्रबन्धक 1.0.0
विन्डोज7को साथ ल्यापटपमा कुञ्जीपाटी अक्षम पार्नुहोस्
नीरो प्रयोग गरेर डिस्कमा संगीत रेकर्ड गर्नुहोस्
YouTube किन सोनी टिभीमा काम गरिरहेको छैन?
Smart-TV को सबैभन्दा धेरै खोजी-आधारित विशेषताहरू YouTube मा भिडियोहरू हेर्दै छन्। यति लामो समयसम्म, सोनीको टिभिमा यो सुविधाको साथ समस्याहरू थिए। आज हामी तपाईंलाई सुल्झाउने विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। विफलताको कारण र यो समाधान गर्नका लागि विधि कारण "स्मार्ट टिभी" चलिरहेको छ जसमा अपरेटिङ प्रणालीमा निर्भर गर्दछ।
ब्याच चित्र रिजाइजर 7.3
ब्याच तस्बिर रिजाइजरलाई आकार वा पहलू अनुपात बदल्न आवश्यक प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपयोगी हुनेछ। कार्यक्रमको कार्यक्षमताले तपाईंलाई यस प्रक्रियालाई केही क्लिकहरूमा कार्य गर्न अनुमति दिन्छ। यसको विवरणहरू हेरौं। मुख्य विन्डो सबै आवश्यक कार्यहरू यहाँ प्रदर्शन गरिएका छन्। छविहरू अपलोड गर्दै सार्न वा फाइल वा फोल्डर थप्न सकिन्छ।
2018 PS4 मा5सर्वश्रेष्ठ बिक्रि खेलहरू
प्रत्येक वर्ष इलेक्ट्रनिक मनोरञ्जन उद्योग नजिक रहेको छ जुन कुन शताब्दीको विज्ञान कथा लेखकहरूले देखाएका छन्। कम्प्यूटर गेमहरू र कन्सोलहरू उनीहरूको ग्राफिक्स, साजिश चाल र अन्य तत्वहरूसँग सजग हुन्छन्। निस्सन्देह, PS4 उच्च-स्तरको कन्सोल मध्ये एक हो, र 2018 मा यसको लागि धेरै खेलहरू थिए।
सुन्दर दृश्य डिजाइन YouTube च्यानल
यदि तपाइँ आफ्नो कामको साथ भिडियो ब्लगिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले नचाहिने अनौठो, रोचक र उच्च गुणस्तर सामग्री बनाउने बारे हेरचाह गर्नुपर्दछ। च्यानल र भिडीयोको दृश्य डिजाइन यो प्रकारको गतिविधिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यस लेखमा हामीले तपाईंको लागि केही सुझावहरू र पाठहरू चयन गरेका छौं जुन च्यानलको सुन्दर डिजाइन सिर्जना र अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ।
आईफोनमा स्क्रिनसट कसरी बनाउने?
स्क्रिनसट - एउटा स्न्यापसट जसले तपाइँलाई स्क्रिनमा के गरिरहेको छ कि क्याप्चर गर्न अनुमति दिन्छ। त्यस्ता अवसरमा विभिन्न परिस्थितिहरूमा उपयोगी हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, निर्देशनहरू ड्राइभिङ्ग गर्न, खेल उपलब्धिहरू तय गर्दै, प्रदर्शन त्रुटिको दृश्य प्रदर्शन आदि। यस लेखमा, हामी आईफोनको स्क्रिनशट कसरी लिने बारे नजिकको दृष्टिकोण लिनेछौं।
एन्ड्रोइडमा छुट कार्डहरू भण्डारण गर्न उत्तम अनुप्रयोगहरू
आज, Android मा लगभग कुनै पनि स्मार्टफोन एक सार्वभौमिक उपकरण हो, तपाईंलाई धेरै कार्यहरू गर्न र विभिन्न जानकारी सुरक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। यस्ता अवसरहरूमा विशेष अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरेर छुट कार्डहरूको भण्डारण समावेश गर्दछ। ती सबै भन्दा राम्रो, हामी यो लेखमा विचार गर्छौं।
एन्ड्रोइडमा अनुकूल रिकभरी स्थापना गर्दै
Android मा संगीत डाउनलोड गर्नुहोस्
किन इजाजतपत्र भएको एंटीवायरस सस्ता छ
अधिकांश ग्राहकहरू जसले मलाई "एंटीवायरस स्थापना गर्न" सोध्छन्: उनीहरूले निःशुल्क एंटीवायरस प्रोग्रामहरू - अहिरा, अस्टस्ट, आदिको अस्तित्वबारे जान्दछन्; तिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा केहि कार्यक्रमहरू स्थापना गर्न सक्षम छन्। नोट: यदि तपाईले निःशुल्क एंटीवायरस सुरक्षामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, त्यसपछि हामीसँग5निःशुल्क एंटीवायरसको समीक्षा छ।
हामी एक औपचारिक र व्यक्तिगत प्रमाणपत्र प्राप्त WebMoney
WebMoney प्रणालीमा सबै आधारभूत कार्यहरू प्रदर्शन गर्न तपाईंसँग एक औपचारिक प्रमाणपत्र हुनुपर्दछ। यसले तपाईंलाई जेबहरू सिर्जना गर्न, रकम फिर्ता गर्न र रकम स्थानान्तरण गर्न र अन्य कार्यहरू प्रदर्शन गर्न दिन्छ। थप अवसरहरू प्राप्त गर्न, तपाइँसँग पहिल्यै व्यक्तिगत प्रमाणपत्र हुनु पर्दछ। यो सबै सजिलै संग र छिटो हुन्छ।
माइक्रोसफ्ट वर्डमा स्वत: शब्द फिचर
सबै MS Word प्रयोगकर्ताहरू यस तथ्यलाई सजग छन् कि यस कार्यक्रममा निर्दिष्ट सूत्रहरू प्रयोग गरेर गणना गर्न सम्भव छ। निस्सन्देह, साथी साथी सूटको क्षमताहरू पहिले, एक एक्सेल स्प्रिेडसिट प्रोसेसर, शब्द बाहिर समाउँदैन, तथापि, साधारण गणना अझै पनि यसमा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ। पाठ: शब्दमा एक सूत्र लेख्न कसरी लेख्नुहोस् यस लेखले कसरी Word मा रकम गणना गर्न छलफल गर्नेछ।
विन्डोज 10 मा डिफल्ट प्रोग्रामहरू असाइन गर्दै
पहिले नै राम्रो तरिकाले विकसित गरिएको सञ्चालन प्रणाली प्रयोग गरेर विन्डोज 10 यदि तपाईं राम्ररी कन्फिगर गरेर यसलाई आफ्नो आवश्यकतामा अनुकूल गर्नुहुन्छ भने पनि अधिक आरामदायक हुन सक्छ। यस सन्दर्भमा परिभाषित मापदण्ड मध्ये एक हो कि डिफल्ट द्वारा प्रयुक्त विशेष प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्न को लागी कार्यक्रम हो - संगीत बजाउँदै, भिडीयो प्ले गर्दै, अनलाइन जानुहोस्, मेलसँग काम गर्दछ।
विन्डोज7मा "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" त्रुटि निवारण
एक सामान्य समस्या हो कि विन्डोज7प्रयोगकर्ताहरू मुठभेड BSOD हो, पछि "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" त्रुटिको नाम। यस खण्डको कारण के हो भनेर हेर्नुहोस्, र यसलाई हटाउने उपायहरू के हो। यो पनि हेर्नुहोस्: विन्डोज7लोड हुँदा मौरी स्क्रिनको कसरी हटाउने?
घटक भण्डारणको पुनःप्राप्ति विन्डोज 10
यदि केहि फाईलहरु को दौरान सिस्टम फाईलहरु र DISM को उपयोग गरेर विंडोज 10 छवि को पुनर्स्थापित गर्न को लागी, तपाईं त्रुटि संदेश "त्रुटि 14090 घटक भंडारण बिग्रेको छ", "घटक भण्डारण को बहाल गरे", "DISM असफल भयो .यो कार्य विफल भयो" या "ढूंढने में असमर्थ" स्रोत फाईलहरू।
माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा परीक्षणहरू सिर्जना गर्दै
अक्सर, परीक्षणको गुण परीक्षण गर्न परीक्षणहरू प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू पनि मनोवैज्ञानिक र अन्य प्रकारका परीक्षणका लागि प्रयोग गरिन्छ। एक पीसीमा, प्रायः विशेष अनुप्रयोगहरू परीक्षण गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। तर एक साधारण माइक्रोसफ्ट एक्सेल कार्यक्रम, जुन लगभग सबै प्रयोगकर्ताहरूको कम्प्यूटरमा उपलब्ध छ, यो कार्यसँग सामना गर्न सक्छ।
हामी कम्प्युटरबाट बच्चाबाट कम्प्युटर रोक्छौं
YouTube एक खुल्ला भिडियो होस्टिंग सेवा हो, जहाँ सबैले कुनै पनि भिडीयोलाई कम्पनीको नियमहरू पालन गर्न अपलोड गर्न सक्छ। तथापि, सख्त नियन्त्रणहरूको बावजूद, केही भिडियोहरू बच्चाहरूलाई देखाउनको लागि अस्वीकार्य लाग्न सक्छ। यस लेखमा हामी YouTube को आंशिक वा पूर्ण पहुँचलाई सीमित गर्न थुप्रै तरिकाहरू हेर्नेछौं।
Windows XP मा "यन्त्र प्रबन्धक" खोल्नुहोस्
"यन्त्र प्रबन्धक" अपरेटिङ प्रणालीको एक भाग हो जसले जडान गरिएको उपकरण नियन्त्रण गर्दछ। यहाँ तपाईंले हेर्न सक्नुहुनेछ के जुडिएको छ, कुन उपकरण सही काम गर्दछ र कुन छैन। प्रायः, निर्देशनहरूमा "उपकरण प्रबन्धक खोल्नुहोस्" वाक्यांश समावेश गर्दछ।
NVIDIA GeForce GTS 250 को लागि ड्राइभर डाउनलोड गर्दै
एक भिडियो कार्ड कुनै पनि कम्प्यूटर वा ल्यापटप मा एक महत्त्वपूर्ण घटक मध्ये एक हो। यद्यपि, यसको उचित प्रकार्यको लागी, तपाईंलाई एक उपयुक्त चालकको हालको संस्करण चाहिन्छ। लेखको सन्दर्भमा, हामीले वर्णन गर्नेछौं कि कसरी NVIDIA GeForce GTS 250 को लागि सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने हो। GTS 250 को लागि चालक डाउनलोड गर्दै सबै विधिहरू सबै को कसैलाई मात्र होइन GTS 250 मा प्रदान गरिएको हुन सक्छ, तर यो धेरै अन्य NVIDIA भिडियो कार्डहरूमा।
तपाईंको कम्प्युटर वा ल्यापटपको विशेषताहरू जान्न4तरिका
तपाईले विभिन्न परिस्थितिमा व्यक्तिगत कम्प्यूटर वा ल्यापटपको विशेषताहरू हेर्न आवश्यक पर्दछ: जब तपाइँ भिडियो कार्डको लायक छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ, RAM बढाउनुहोस्, वा तपाईंलाई ड्राइभर स्थापना गर्न आवश्यक छ। विस्तारमा घटकहरूको बारेमा जानकारी हेर्न धेरै तरिकाहरू छन्, यो तेस्रो-पक्ष कार्यक्रमहरू प्रयोग नगरी यो हुन सक्छ।
ओभरड्राफ्ट- Yandex को लागि क्लब। ब्राउजर
सेवा आउटबिड क्लब रूसका सबै शहरहरूमा प्रयोग कार बिक्रीका लागि विज्ञापनहरू संकलन, निरीक्षण र जाँच गर्नको लागि एक ठूलो प्लेटफार्म हो। जानकारी जस्तै Avito.ru, Drom.ru, Avto.ru र अन्य समान साइटहरु जस्तै जानकारी बाट एकत्रित गरिएको छ। यो क्लब उनका लागि उपयोगी हुनेछ जसले सुरक्षित रूपमा र लाभप्रद कार खरीद गर्न जाँदैछ, आफैका पुन: पुन: वा ग्राहकहरु को लागी वाहनों को चयन मा लागेका व्यक्तिहरु।
IOS र MacOS
Copyright © 2020 पीसी थर्मो उपकरणहरू
https://termotools.com ne.termotools.com © 2020